May 2, 2022 - Online Hartha
ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်​၍ စီးပွားရှာလိုသူများအတွက် လက်တွေ့နည်းလမ်းကောင်း
May 2, 2022 by Online Hartha
ကွမ်းယာဆိုင်ဖွင့်​၍ စီးပွားရှာလိုသူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်း ကွမ်းဝယ်ရာတွင် စီးပွားရေးအမြင်အရ ကွမ်းရွက်သေးသေးကိုသာ ဝယ်ရမည်။ အရွက်သေးပါက ပိဿာလိုက် ဝယ်ယူရာတွင် ရွက်ရေများများပိုရသဖြင့် ကွမ်းယာ အထွက်​ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွမ်းရွက်ကို အရင်း(အရိုး)ဘက်နှင့်အဖျားဘက်ကို ညှပ်ထားရသည်။ ကွမ်းရွက်ကို ရေဆေးပြီး ဒိန်ချဉ်နှင့်စိမ်ကာ ကွမ်းဘန်းထဲတွင် ညီညီညာညာ မျှတ လှပအောင် စိမ်ထား နှပ်ထားပါက မိမိဆိုင်မှ ကွမ်းယာကိုစားလိုက်သည်နှင့် နုနုညံ့ညံ့ အရသာကို ရရှိစေပြီး စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထုံး ထုံးစပ်နည်းအလွယ်နည်း။။ ကွမ်းယာ ပစ္စည်းဆိုင်မှ အသင့်ဖောက်ထားသော ထုံးဗူး (ရေသန့်ဗူးနှင့်) ထည့်ထားသော ထုံးဗူး သိုမဟုတ် အထုတ်ကိုဝယ်ပါ အုန်းနို့(စတိုးဆိုင်မှာ အသင့်သုံးရှိ) မိမိကုန်လောက်မည့်ပမာဏကိုချိန်ပြီး ထုံး ၅ကျပ်သားကို ထမင်းစားဇွန်းဖြင့်အုန်းနို့ တစ်ဇွန်းနှုန်းထည့်ပါ ဟင်းချိုမှုံ့ကို အမှုံဖြသ်သည်ထိ ကျိတ်ပြီး ထုံး၅ကျပ်သားကို … Read more
ကားမတော်တဆမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အသက် အန္တရာယ်အတွက် (၃)စက္ကန့်စာ သတိတရား
ကားမတော်တဆမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အသက် အန္တရာယ်အတွက် (၃)စက္ကန့်စာ သတိတရား ယာဉ်မတော်တဆမှု အသက်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အချက်များတွင် လူများ သတိမမူ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာကတော့ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပါပဲ။ ထိုင်ခုံခါးပတ် ဟာ ယာဉ်မတော်တဆမှု များတွင် အသက် သေဆုံးမှုနှု န်း၊ ဒါဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိနူန်းများကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးဟာ အရှိန်တစ်ခုနှင့် မောင်းနေရာက တစ်ခုခုနှင့် တိုက်မိပါက ယာဉ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ လူကလဲ အဲဒီအရှိန်နှင့် ဆက်ရွေ့လျား ပါတယ်။ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်မထားတဲ့ လူတွေက အဲဒီအရှိန်နှင့်ပဲ ကားလက်ကိုင် စတီယာရင်၊ ကားမှန်၊ ကားအတွင်းက ပစ္စည်းတွေနှင့် တိုက်မိခိုက်မိပါတယ်။ ထိုင်ခုံခါးပတ်ဟာ ယာဉ်မတော်တဆမှု များအတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှု တစ်ခုပါပဲ။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် … Read more
သစ်သီးပင်နှင့်နှစ်ရှည်ပင်များအတွက် သဘာဝ​ဘော်ဒိုသုတ်မှိုသတ်ဆေး ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ဖော်စပ်အသုံးပြုနည်း
သစ်သီးပင်နှင့်နှစ်ရှည်ပင်များအတွက် သဘာဝ​ဘော်ဒိုသုတ်မှိုသတ်ဆေး ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ ဖော်စပ်အသုံးပြုနည်း Home Made Fungicides For Fruit Trees သစ်သီးပင်နှင့်နှစ်ရှည်ပင်များအတွက် သဘာဝ​ဘော်ဒိုသုတ်မှိုသတ်ဆေး (ထုံး+ဒုတ္ထာ) မည်သည့်သီးနှံများရှိရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်သနည်း? ပိန္နဲ၊ ကျွဲ​ကော၊ ရာဘာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်၊ ဒူးရင်း၊ ထောပတ်၊ သရက်၊ ရှောက်သံပုရာ၊ စပျစ်၊ အုန်းသီး၊ ကွမ်း၊ ကွမ်းသီး၊ နှင်းဆီ၊ ပန်းမန်များ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ နှင့် သစ်သီးပင်များတွင်ကျရောက်သော မှိုရောဂါများကို ကောင်းစွာကာကွယ် နှိမ်နှင်းနိုင်သော​ဆေးတမျိုးဖြစ်​ပေသည်။ ဘော်ဒိုဆေးရည်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? သမိုင်းကြောင်းအရ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဘော်ဒိုတက္ကသိုလ် (Bordeaux University)မှ စတင်သုံးစွဲခဲ့သောကြောင့် တက္ကသိုလ်အမည်အစွဲပြု၍ ဘော်ဒိုဆေးရည်ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ဆေးရည်တွင် ဒုတ္ထာ၊ ထုံး နှင့် ရေတို့ကို အချိုးကျ ‌ရောနှောဖျော်စပ်ထားသော မှိုသတ်ဆေးဖြစ်ပေသည်။ မည်သည့်နည်းများဖြင့် … Read more
မြန်မာပြည်မှာ အလကားရနေတဲ့ ဒီအမှိုက်တွေကို အမေရိကန်မှာ (၁၃)ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေလို့ လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
မြန်မာပြည်မှာ အလကားရတဲ့ အရွက်ကို အမေရိကန်မှာ (၁၃) ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းနေလို့ ရှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ အရမ်းကို အံ့ဩမိ ပါသည်.. ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး.. ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာပေါများလှတဲ့ သရက်ရွက် (Mango Leave) ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၂ အောင်စ ကို ၁၃ ဒေါ်လာ (13$) နဲ့ရောင်းနေတာတွေ့ရတော့ ဘာတွေကောင်းလဲဆို google ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်…။သူများတွေရောင်းနေတာ ကုန်ချောအဆင့်တောင်မဟုတ်ပါဖူးနော်.. သူများရောင်းတာထိုင်ဝယ်စားနေရမယ့် ခေတ်လဲ မဟုတ်တော့ပါဖူး သရက်သီးအရွက်ဟာ သရက်သီးထက် အဟာရပိုများနေပါတယ်.. ဗီတာမင် အေ ဘီ စီနဲ့ antioxidant တွေကြွယ်ဝပါတယ်…။ သရက်ရွက်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာ ရေနဲ့ပြုတ်၍ဖြစ်စေ အရွက်ကိုအမှုန့်ပြုလုပ်ဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သလို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပါတယ်…။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနေဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းညိဖို့ သောက်သုံးကြပါတယ်.. ဒါအပြင် သွေးတိုးရောဂါ … Read more
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပိုက်ဆံချေးပြီး စိတ်သောကရောက်နေလျှင်…
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ပိုက်ဆံချေးပြီး စိတ်သောကရောက်နေလျှင်… ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေလား ချေးထားသူမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ပြန်မပေးပဲ ကြန့်ကြာအောင်အချိန်ဆွဲနေလား ရစရာရှိသူ ငွေချေးထားသည့် ငွေရှင်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်ပါက မွေးနေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီ မှ (၁)ခွဲအတွင်း အိမ်ဘုရား၌ ကံကော် ၂ ညွန့် အမွေးတိုင် (၃) တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၃) တိုင် လှူပါ။ ထိုနောက် လက်ဝါးတွင် ငွေချေးသူ၏အမည်ကိုရေးပါ။နှမ်းဆီ တစ်စက်လက်ဖဝါးတွင်ပွတ်ပါ။ ငွေ တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက် လက်ဝါးထဲထည့်လက်နှစ်ဖက်နှင့်ရိုက်ပြီး “(နေ့သမီး…..မ …….) ငါ့ငွေ ငါ့ထံလာပေးစေ” ပြောရမည် ။ ပြီးလျှင် လက်ဝါးနှစ်ဘက်ကို မီးပူဇော်ထားသည့် ဖယောင်းတိုင်မီးနှင့် နွေးနွေးကင်ပြီးလက်ခုပ် (၆)ချပ်တီး လိုရာဆန္ဒများအသေအချာတောင်းပါ။ ထွန်းထားသည့် … Read more
အကြော်တစ်ခုကို ၅၀ ပါ ၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထားလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်သောအခါ
“ကျွန်တော်နဲ့အကြော်သည်အမေကြီး”အမှတ်တမဲ့ပါပဲ နားထဲခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်တာပါ အကြော်တစ်ခုကို ဘယ်လောက်လဲ ?ကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်(ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ပုံစံမျိုးပါပဲ)အကြော်ဝယ်ဖို့မေးနေတဲ့ အသံပါ။ အကြော်တစ်ခုကို ၅၀ပါ၁၀၀ဖိုးကို ၃ ခု ထားလိုက်မရလို့ပါကွယ်၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထား…တအောင့်လောက်နေတော့..နောက်ထပ်ကြား လိုက်ရတယ်” လာ…သားအကြော်တွေက ညစ်တီးညစ်ပတ်နဲ့ မသန့်ရှင်းဘူး…မစားချင်နဲ့..သား”..ဆိုပြီး .ကလေးကို ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားသွားတယ်…သေချာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အသက်(၆၀)ကျော် အမေကြီးတစ်ယောက် အကြော်ရောင်းနေတာကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဈေးဆစ်နေတာ။ သြော်..လူတွေများခက်လိုက်တာဗျာအကြော်ဝယ်ဖို့ဈေးဆစ်လို့မရတော့ညစ်ပတ်တယ်မစားနဲ့လို့ ပြောသွားတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့အဆင့်အတန်းကို မဝေဖန်ချင်တော့ မစဉ်းစားချင်တော့အကြော်သည် အမေကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ အားငယ်သွားတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်။ ” ဟောဒီက…အကြော်ပူပူလေး…”ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်…။ ကျွန်တော် ကမန်းကတန်းလှမ်းခေါ်လိုက်တယ် အမေကြီး…ခဏနေပါအုံးဗျ အကြော်ဝယ်ချင်လို့ ပြန်လှည့်လာပြီး…အကြော်ဗန်းကို ချပေးတယ် ကြည့်လိုက်တော့ မုန့်ပေါင်းနဲ့ အကြော်လေးတွေက အစီအရီ…ဗန်းထဲမှာစားချင်စဖွယ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလုပ်ထားတာပါ။ (စဉ်းစားမိတယ်.းနေရဲ့ အပူရှိန်အောက်မှာအကြော်တွေကမနက်က … Read more
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါနေတဲ့ သွားများကို သေချာပေါက် ဖြူဖွေးစေမည့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းလေးပါ
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝါနေတဲ့ သွားများကို သေချာပေါက် ဖြူဖွေးစေမည့် အိမ်တွင်း နည်းလမ်းလေး သွားများကို ဖြူဖွေးတောက်ပစေမည့် အိမ်တွင်း သွားဖြူဆေး အပြုံးဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုံးလိုက်တဲ့အခါ သွားလေးတွေက ဖြူနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလည်း ပိုတိုးလာစေပါတယ်။ ပင်ကိုသွားဝါတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကော်ဖီလက်ဖက်ရည် အရောင်စွဲနေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝါနေတဲ့ သွားတွေကို ဖြူဖွေးလာစေမယ့် နည်းလမ်းလေးရှိပါတယ်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ နနွင်း အုန်းဆီ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် အုန်းဆီ၂ ဇွန်းကို ပန်းကန်လုံးလေးထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ၂ ဇွန်းရောလိုက်ပါ။ နနွင်းမှုန့်တစ်ဇွန်းရောလိုက်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို သေသေချာချာ နှံ့စပ်အောင်ရောမွှေပေးရပါမယ်။ အသုံး ပြုနည်း ရလာတဲ့အနှစ်ကို သွားပွတ်တံအပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်သွားကို သေသေချာချာလေးတိုက်လိုက်ပါ။ ဘာအမြှုပ်မှထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ပလုတ်ကျင်းတဲ့အခါ ရေနွေးနဲ့ကျင်းပေးပါ။သွားပွတ်တံကိုလည်း ရေနွေးနဲ့ပဲ ဆေးကြောပေးပါ။ ဖြူစင်တောက်ပတဲ့ … Read more
အသက် ၈၅နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရသောအခါ
ထိုင်နေတုန်း အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကိုအံသြသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာရုန်းကန်လှုပ်ရှားဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ စားရေးသောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးအတွက် တစ်ကိုယ် တည်းရှာဖွေဖို့ဆိုတာ ပိုခက်ခဲပါတယ်။ ယခုလိုခက်ခဲတဲ့ကြားက အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်အဖွားအိုတစ်ယောက်က ကားငှားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ယခုကဲ့သို့မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ဆည် Alpha ဘိလပ်မြေစက်ရုံရှေ့ထိုင်နေတုန်း မန္တလေးဘက်က သနပ်ခါးတုံးရောင်းပြီးပြန်လာတဲ့ အသက် ၈၀ ကျော်အဖွားအိုတစ်ယောက် သူ့အိမ်ကိုပြန်ဖို့ ကားကြုံစီးပါရစေ ပိုက်ဆံ ၅၀၀ ပေးပါ့မယ်ဆိုလို့ အိမ်အရောက်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ ၈၅ နှစ်အရွယ်ထိ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး အလုပ် လုပ်နေတဲ့အဖွားကို လေးစားသောအားဖြင့် ပိုက်ဆံနဲ့ကန်တော့ပါရစေဆိုတော့ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ဆုတွေတရစပ်ပေးနေတော့တာပဲ။၅၀၀၀ တန် ၅ ရွက်ကို မယုံနိုင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်း ဆုတွေတရစပ်ပေးနေတော့တယ်။ ဝမ်းသာဝမ်းနဲတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ငေးကျန်ခဲ့တဲ့အဖွား ကျန်းမာပါစေ။ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Myozayar … Read more
သိသိသာသာ ဈေးခေါ် ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့ အစီအရင်…
သိသိသာသာ ဈေးခေါ် ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့ အစီအရင်… ဈေးခေါ်အင်း အဆောင်လက်ဖွဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းကွဲတွင် ကံ့ကူဆန်နှင့်အင်းချပြီး ဥုံ ဧတံသရဝံ သွားဟ ၃၇ ခေါက်ရွတ်၍ သိဒ္ဓိတင်ပါ ။ အသုံးပြုလျှင် အင်းကို ရေစိမ်ပြီး ထိုရေနှင့် ရောင်းလိုသော ကုန်ပစ္စည်းကို ပက်ဖျန်းပါ ။ သိသိသာသာကုန်ရောင်းထွက်စေသည်။ ရထားသွားအင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘေးတွင် စေလေးချက်ရံပါ။ ဈေးခေါ် ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့ အစီအရင် အင်းစမ လိုအပ်သူ၍ ပြောလာသူများအတွက်နှင့် အခြားလိုအပ်သူများ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျောက်သင်ပုန်းကွဲ မရလျှင် ကြေးပြားတွင် စီရင်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နည်း ဈေးရောင်းမကောင်း၍ စိတ်ညစ်နေသူများ၊ နေရာကောင်း အကွက်ကောင်းသော်လည်း အရောင်းအဝယ်တိတ်နေပါသ လား၊ တခြားအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများလဲ အရောင်းမထွက်တာမျိုး အဝယ်မလာတာမျိုးဖြစ်နေပါက ကံပွင့် လာဘ်ပွင့်ဖြစ်လာအောင် အောက်ပါအတိုင် ပြုလုပ်ပါ…။ အလှပန်းအိုးတစ်အိုးထဲသို့ ဆန်လက်တဆုတ် … Read more
ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့အခါနဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါကွာခြားချက် (၂ မိနစ်လောက်လေးပဲ အချိန်ပေးဖတ်ကြည့်ပါ)
ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့အခါ နဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အခါကွာခြားချက် ( ၂ မိနစ် လောက်လေးပဲ အချိန်ပေးဖတ်ကြည့်ပါ ) ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ အိမ်မှာပဲ သက်သတ်လွတ် စားတယ် ။ ပိုက်ဆံရှိလာတော့ ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ သက်သတ်လွတ် သွားစားတယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ စက်ဘီး စီးတယ် ။ ပိုက်ဆံရှိလာတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ စက်ပေါ်မှာ စက်ဘီး သွားနင်းတယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိတုန်းက အစာရှာဖို့ လမ်းလျှောက်ရတယ် ။ ပိုက်ဆံရှိလာတော့ အဆီချဖို့ လမ်းလျှောက်ရပြန်တယ် ။ အို လူတွေ လူတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှည့်စား နေကြတာပါပဲလား ။ ပိုက်ဆံမရှိတုန်းကတော့ အိမ်ထောင်ပြုချင် နေကြပြီး ပိုက်ဆံရှိလာပြန်တော့ ကွာရှင်းဖို့ စဉ်းစားကြပြန်ရော ။ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်မိန်းမကိုပဲ အတွင်းရေးမှူး … Read more